कोरोना भाइरस’बारे १२ वर्ष अघिको त्यो भविष्यवाणी मिल्यो, यसो भनेकी थिइन् महिलाले
March 10, 2020 5641
कोरो’ना भाइर’सबारे १२ वर्ष अघि गरिएको भविष्यवाणी सत्य सावित भएको छ । सन् २०१२ मा प्रकाशित ‘इन्ड अफ डेज’ पुस्तकमा निमो’निया जस्तै खत’रनाक रोग’ सन् २०२० मा फैलन भनिएको थियो । पुस्तकमा फोक्सो’मा अस’र गर्ने र निमो’निया जस्तै रो’गको सं’क्रमण फैलन भनिएको थियो ।
यस्तो भविष्यवाणी गरिएको पुस्तक लेख्ने लेखिका हुन् सिल्भिया ब्राउनी ।भविष्यवाणी गरिएको पुस्तक प्रकाशित भएको अर्को वर्ष नै ब्राउ’नीको ७७ वर्षको उमेरमा निध’न भएको थियो । उनी आफूलाई अलौ’किक शक्ति भएको नारी मान्थिन् ।
भविष्यवाणी गरिएका पुस्तक लेख्थिन् । आध्यात्मिक पुस्तक लेखेर करोडौं कमा’इन् ।
कतिपय आपर’धिक घट’नामा प्रह’रीलाई सहयोग गरेको दाबी गर्थिन् । हराएका मानिस ज्युँदो छन् कि मरे’का छन् समेत भन्थिन् । कतिपय घट’नामा उनले हराएको मानिस कहाँ छन् भनेर सत्य पत्ता लगाइदिएकी थिइन् ।
यसकारण पनि उनी आफूमा अलौकि’क शक्ति भएको दाबी गर्थिन् । ब्राउनीसँग भविष्य जान्न चाहनेले कुरा गर्थे । उनीसँग आधा घन्टा कुराकानी गरेको सात सय डलर तिर्थे ।
भविष्य’वाणी गर्ने ब्राउनीले ४० पुस्तकहरु प्रकाशित गरिन् । जसमध्ये भविष्य’को बारेमा बढी उल्ले’ख थियो र बढी विक्री भ’एकामध्ये पर्दथे । उनका पुस्त’कमध्ये सिक्रे’ट्स एन्ड मिस्ट्रिज अ’फ दी वल्र्ड, इफ यु कुड सी ह्वाट आई सी, इन्सा’इट र इन्ड अफ डेज बढी विक्री भएका’मा पर्छन् ।
इन्ज अफ डेजमा नै उनले सन् २०२० मा निमोनि’या जस्तै रो’ग फैल’न लेखेकी थिइन् ।१९ अक्टोबर सन् १९३६ मा सिल्भिया सुमेकरका रुपमा अमेरिकाको क्यालिफो’र्निमा जन्मिएकी सि’ल्भिया ब्राउनी तीन वर्षकै उमेरमा अलौ’किक शक्तिकी थिइन् ।
सिल्भिया ब्राउनीको पुस्तक’ले कोरो’ना भाइर’स कसरी फैलन्छ र परिणा’म के हुन्छ भन्ने समेतको भविष्यवाणी गरेको छ । पुस्तकले यो रो’ग जति छिटो आयो उति छिटो नै हराउने भविष्ण’वाणी गरेको छ । रोग’ले केहीवर्षपछि आक्रम’ण फैरि गर्न सक्ने तर, पूर्ण रुपमा हरा’उने भनेको छ । यसको अर्थ रो’ग चाँडै रहनेछैन ।
केही वर्ष यो रो’गले दुःख दिनस’क्छ तर धेरै वर्ष रहँदैन । छिट्टै आउने र छिट्ट हराउने भविष्यवाणी’ गरिएको यो रोग कोरोना भाइ’रसको संक्र’मण हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । रोग छिट्टै आएको छ । यो छिट्टै फैलि’एको पनि छ ।
रो’ग भविष्णवाणी गरेजस्तै छिट्ट हराउ’ने र पूर्ण रुपमा निर्मुल हुने हो होइन प्रतिक्षाको विषय छ । ब्राउ’नीले दाबी गरेजस्तै उनी अलौ’किक क्षमताकी हुन् भन्ने को’रोना भाइ’रस फैलिने भविष्य’वाणी मिल्नुले बुझ्न सकिन्छ । जसका का’रण उनी मृत्यु’पछि झन् चासो’मा परेकी छिन् ।
Prevमन्त्रीले आफ्नी छोरीको बिहेमा गरे ८ अर्ब खर्च
Nextइटहरीमा दिउसै ५ लाख चोरी ( हेर्नुहोस् भिडियो सहित)
पानी-पुरीमा पिसाब मिसाइ`रहेको प्रत्यक्ष भेटियो (भिडियो हेर्नु`स्)
अमेरिकी डलरको भाउ घट्यो, अरु देशको मुद्राको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नु`होस्
आज सुनको भाउ बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्…
हास्यकलाकार राजिबका ९ वर्षीय छोराको निधन, पिताको जन्मदिनमा छोराको गयो ज्यान